Ebee ka m ga-eme ihe m na SEO maka Amazon ịkwado nke ọma site na otu ụbọchị?
Oge ọ bụla anyị na-achọ otu isiokwu na Amazon, e nwere ọtụtụ ndepụta nke ngwaahịa na-egosi anyị. Anyị niile makwaara na ọ bụ naanị ngwaahịa ndị e depụtara na ọkara dị na peeji nke atọ (naanị ịchọta - ahịa) ka a ga - eweta ma ọ bụrụ na ị ga - ekwu na ọganihu dị mkpa na - egosi na ịnweta ya na nchọta 10. ). Ya mere, ịgbaso usoro ziri ezi na SEO maka Amazon nwere ike ịsị na ọ bụ ọrụ na-enye nsogbu, karịsịa na ileba anya mbụ. N'ụzọ dị nro, nnukwu ụlọ ahịa ịzụ ahịa n'ịntanetị kachasị mma kachasị mma iji nye naanị ahụmịhe onye ọrụ ọhụụ na ndị na-ege ntị n'ozuzu ụwa. Amazon na - arụ ọrụ ahụ nke ọma - na - atụ aro ngwaahịa ndị dị mma ma na - enye akwụkwọ ndụ ọkụ na - emepe ahịa asọmpi. A sị ka e kwuwe, ọ na-eme ka ndụ dịkwuo mfe karịa 80 nde ndị na-eguzo n'ebe ahụ.
O doro anya na usoro nhazi dị otú ahụ na-achịkwa site na nhazi nke ogo ya. Ọ bụ ya mere ọ ga - abụ ọrụ dị mma - ịkwado ọkwa nke ọma site na ụbọchị - nyere gị ka ị ghọta iwu nke egwuregwu ahụ ma kwadoro ya na usoro ahaziri iche maka SEO maka Amazon. Site na A9 algorithm, Amazon bụ ịkụ nzọ na isi ihe atọ dị mkpa dị ka ihe dị mkpa, ọnụego mgbanwe, na ikike ngwaahịa. N'ụzọ dị otú ahụ, n'okpuru ebe a, m ga-eme ka ị mara ụfọdụ n'ime isi ebe ị ga-eme ihe SEO maka Amazon ma nwee ọkwa nke ọma site na mmalite nke ụlọ ahịa ị na - atụgharị - ka anyị malite na mkpa na mgbanwe nke mgbanwe.
Tier One: Product Page Nnweta
Ọ bụ isi ihe na-atọ ntọala bụ isi maka ogo ngwaahịa gị. Ọ bụ ya mere m ga-eji kwado usoro atụmatụ zuru ezu na SEO maka Amazon nke na-agbaso ihe ndị na-esonụ (na-enye ha ihe kachasị mkpa bụ MUST - naanị were ya).
Akụkụ ndị bụ isi nke dị na SEO maka Amazon.
Ntọala aha (n'adịghị ka Google, Amazon na-emeghe ọnụ ụzọ maka ihe ọ bụla, ọbụna na-atụ egwu, nyocha na isiokwu ndị bụ isi na nkebi ahịrịokwu dị na aha ngwaahịa);
Ihe Mgbochi na Ihe Odide (ihe niile ị chọrọ ebe a bụ iji jupụta igbe Zụrụ, echefukwala ịgụnye isi ihe ziri ezi);
Eke na emeputa (nkọwa onwe onye);
Atiya na Ngalaba Nhọrọ (dị nnọọ ijide n'aka na ị ga-eso n'ụdị ya, ọ gwụla ma ịchọrọ ka egosiputa ngwaahịa gị n'okpuru na-ezighị ezi);
Oge Nchọta (jupụta mpaghara ise kwekọrọ na isiokwu ndị dị na isi, zere iji otu ihe ahụ ugboro ugboro - ị ga - atụle iji iji okwu ndị LSI mee ihe);
URL (chee echiche nke ọma tupu ịme ajụjụ URL maka akwụkwọ ngwaahịa gị, kwụọ ụgwọ zuru ezu iji nweta ihe nile - Amazon na-eji ya iji chọpụta ndepụta gị na ọchụchọ dị mkpa mgbe niile).
Nke abụọ: Ntụgharị ọnụego ọnụego Mmelite
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ngwaahịa gị zute ngwa ahịa ndị kasị mma - o kwesịrị ime ka Amazon kwadoo gị nye ndị na-enyocha ndị na-enyocha ihe ka ukwuu. Ya mere, enwere mmekọrịta abụọ dị n'etiti ọnụego mbugharị gị na mmasị ndị ahịa (gụnyere ndị Amazon n'onwe ya).
Akụkụ ndị dị mma iji meziwanye atụmatụ CTR na SEO maka Amazon:
Nnukwu ahịa mgbe niile na-egosi ogo na nsonaazụ ọchụchọ ebe dị n'ihu ihu;
Nyocha ndị ahịa na nkwado email (dịka ọmụmaatụ n'iji AMZDiscover ngwaọrụ ịntanetị iji mee ka ndị ahịa nweta ikike);
ngalaba ajụjụ na azịza;
Foto ndị doro anya na-enye nnukwu foto nke webshop gị;
Bounce Rate and Average Time per Visit also affecting your conversions, cheta na Source .